हस्तकला क्षेत्रको विकास : सरकारले दिनुपर्ने चासोका क्षेत्र | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण हस्तकला क्षेत्रको विकास : सरकारले दिनुपर्ने चासोका क्षेत्र
शताब्दियौंदेखि नेपालको निर्यात व्यापारमा हस्तकला क्षेत्रको स्थान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा मुुुलुक दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुँदै जाँदा र आधुनिक उद्योगहरूको स्थापनाको अभाव हुँदा हस्तकलाका उत्पादनहरू नेपालको निर्यात व्यापारमा एक मात्र भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । परन्तु, जुन रूपमा यस क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने हो र यसबाट फाइदा हुनुपर्ने हो, सो अनुसार कार्यहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हस्तकला क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने हो भने देहायका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हस्तकला क्षेत्रको विकास पिरामिड
कच्चापदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, व्यावसायिक उत्पादन, आन्तरिक बजार र बाह्य बजारहरू गरी हस्तकला उद्योगको पिरामिड बनेको हुन्छ । यी पाँचओटै क्षेत्रहरूको विकासमा मनग्य मात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।
हस्तकला क्षेत्रको सबलीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको नियमित र पर्याप्त आपूर्ति हुने गरी जनशक्तिको विकास गर्नु पनि हो । सबै खालका हस्तकला क्षेत्रका लागि तालीम केन्द्रहरूको स्थापना, गुरुकुलहरूको संस्थागत विकास र तिनको सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारबाट पर्याप्त लगानी हुनु आवश्यक पर्दछ ।
हस्तकला क्षेत्र विश्वमै कल्पना, नवसृजना र नवप्रवर्तन गरिनुपर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । समाजको परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने र परम्परागत कलालाई पनि सँगसँगै जोगाएर लैजानुपर्ने दोहोरो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ यस क्षेत्रले । यी पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासमा पर्याप्त लगानी गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
हस्तकला क्षेत्रले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको छ भने अर्कोतिर मुलुकको कला संस्कृति, इतिहास, परम्परा र पहिचानलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । यसमा मेशिनको न्यून प्रयोग हुन्छ । वातावरणमा समेत न्यून प्रभाव पार्छ । यी क्रियाकलापहरूमा सीमान्तीकृत समुदायको समेत उल्लेख्य सहभागिता भएका कारण सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गरी सोही अनुरूपका संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी अनुदानात्मक र प्रोत्साहनात्मक औजारहरूका माध्यमबाट यस क्षेत्रको संरक्षण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हस्तकला क्षेत्र आफैमा मुनाफा निश्चित नभएको र लामो समयसम्म ठूलो मेहनतको लगानीपश्चात् प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले ढुवानी तत्त्वका कारण नेपाली हस्तकलाका सामानहरू नेपाली र बाह्य दुवै बजारमा अन्य मुलुकका उत्पादनभन्दा महँगा पर्न जान्छन् । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हस्तकला क्षेत्रलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विशेष पहिचानको व्यवस्था
नेपाली हस्तकलाका उत्पादनहरू आफैमा विशेष छन् । परन्तु यी विशेषताहरूलाई कानूनी रूपमा पनि विशेष बनाउन आवश्यक हुन्छ । नेपाली हस्तकलाका उत्पादनहरूलाई भौगोलिक संकेत (जस्तै : यत्ति हजार फिटको उचाइमा बुनिएको ऊनी गलैंचा) पेटेन्ट, कपीराइटको व्यवस्था, सामूहिक संकेत चिह्न माध्यमबाट नेपाली हस्तकलालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसैगरी, विशेष जातिहरूले उत्पादन गरेका विशेष उत्पादनहरू (जस्तै : राउटेले उत्पादन गरेका काठका भाँडाहरू) लाई पनि सोही अनुरूप बजारमा पहिचान प्रदान गर्नु पनि आवश्यक छ ।
परम्परागत पेशागत समूहहरूको समुत्थान
नेपालका अधिकांश जातिहरूमा कुनै न कुनै कलामा विशेष क्षमता र अनुभवहरू छन् । ती क्षमता र अनुभवहरूको मूलप्रवाहीकरण, बजारीकरण, सबलीकरण र संस्थागत बनाउन नसक्दा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालका कुनाकन्दरादेखि काठमाडौं उपत्यकासम्म छरिएर रहेका त्यस्ता शीपहरूलाई संगठित गर्दै आधुनिक व्यवस्थापन शैलीमा सम्बन्धित जातिकै व्यवस्थापनमा व्यवस्थित बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । यस कार्यका लागि सरकारबाट पनि आवश्यक वित्तीय, कानूनी र प्रोत्साहनमूलक विशेष सुविधाहरूको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । जातजातिहरूको उत्थानका लागिपरिरहेका संघसंस्थाहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु अझ जरुरी छ । नेपालका जातजातिको उत्थानमा सहयोग गर्ने शुभचिन्तक मित्र देशहरूले पनि सम्बन्धित जातिका उत्पादनहरूलाई आफ्नो देशमा सहज प्रवेशको वातावरण सृजना गरिदिनुपर्दछ र नेपाली मध्यस्थकर्ताहरूले त्यो वातावरण सृजना गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक र बाह्य बजारको समानुपातिक विकास
नेपाली हस्तकला क्षेत्र भन्नासाथ निर्यात भन्ने मात्र बुझिन्छ । आन्तरिक बजारमा पनि जानुपर्दछ भन्ने सोचको विकास हालसम्म हुन सकिरहेको छैन । केवल निर्यातमा मात्र निर्भर उद्योगको भविष्य अनिश्चित हुन्छ । बाह्य बजार कमजोर हुँदा आन्तरिक बजारले भरथेग गर्ने, आन्तरिक माग कमजोर हुँदा बाह्य बजारले भरथेग गर्ने गरी दुवै बजारमा समानुपातिक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हस्तकलाका उत्पादनहरूमा विशुद्ध हस्तकला र मेशिनको प्रयोगको पाटो गरी दुईओटा पक्ष हुन्छ । न्यून क्रयशक्ति भएका क्रेताहरूका लागि मेशिनको प्रयोग गरी तयार गरिएका हस्तकलाका समानान्तर उत्पादनहरूको पक्षलाई विकास र प्रवर्द्धन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । मेशिनको प्रयोगबाट निर्मित वस्तुहरूबाट हुने आयको निश्चित अंश विशुद्ध हस्तकलाका वस्तुहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा लगाउने परिपाटीको पनि विकास गर्नु आवश्यक छ ।
कानूनी र प्रक्रियागत सरलताको व्यवस्था
निर्यात प्रवर्द्धन गृहको साथसाथै निर्यात मात्र गर्ने फर्म/कम्पनी, उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई समेत नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ । ह्याण्ड क्यारीबाट लाने सामानहरूको जाँचपास सहज र सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी मेला समाप्तिपछि विक्री नभएका सामान फिर्ता ल्याउने सरल प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ । विक्री नभएका सामान फिर्ता ल्याउँदा सरल प्रक्रियामा प्रज्ञापनपत्र भरे पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हाल भारत तथा चीनबाट भुक्तानीमा रहेका समस्याको सम्बोधन गर्न बैंकिङ प्रणालीको तत्काल व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । मेलामा भाग लिई फर्केका फर्म/कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सुलभ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सुनचाँदीबाट बनेका बहुमूल्य हस्तकलाका वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणित गर्न प्रयोगशाला जाँचपासलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । निकासीको क्रममा तिर्नुपर्ने निकासी सेवा दस्तूर र प्रक्रिया सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न निकासीको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल अमेरिकी डलर १५० सम्मको नमूना वस्तु निकासी भइरहेकोमा हालको अवस्थामा यो निकै न्यून भएकोले यसलाई बढाएर कम्तीमा अमेरिकी डलर १००० सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
नेपाल आएका विदेशी पर्यटकहरूले हस्तकलाका वस्तुहरू खरीद गरी आफ्नो देश लिएर जाँदा भन्सार बिन्दुहरूमा अनावश्यक झैझमेला हुने गरेकोले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । भन्सार नियमावली अनुसार पर्यटकहरूले स्थानीय बजारबाट खरीद गरेको प्रमाणको आधार र विदेशी मुद्रा सटहीको प्रमाणको आधारमा सरल र सहज निकासीको वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । भन्सार विभागबाट प्रचलनमा ल्याइएको एग्जिम कोडले निकासी व्यापारलाई सहज तुल्याएको छ, तर अन्तरराष्ट्रिय मेलाहरूमा विना एग्जिम कोड रू. ५ लाखभन्दा कम मूल्यका सामानहरू लैजाने फर्म/कम्पनीहरूले व्यापार मेला समाप्तिपछि विक्री नभएका सामान स्वदेश फिर्ता ल्याउँदा सो कोड माग गर्ने हुनाले समस्या उत्पन्न भएको छ । यसैगरी, एग्जिम कोड नवीकरण गर्न रू. पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना, लघु तथा घरेलु हस्तकलाका उद्यमी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । यस्तोे शुल्क धेरै भएकाले न्यूनतम शुल्क मात्र लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यी व्यवस्थाहरूसहित नेपाली हस्तकलाको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र लागिपर्ने हो भने यो मुलुकको अर्थतन्त्रको मियोको रूपमा अघि बढ्न सक्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत दिने निश्चित छ ।